Isibhedlela sikaHulumenisimhlinzele ezibini ngempilo - Bayede News
Isibhedlela sikaHulumenisimhlinzele ezibini ngempilo
Bathi bazophindela ensimini yize kusenzima abeCane Cutters
NGESIKHATHI uHulumeni esohlelweni lokwelapha iNational Health Insurance (NHI), okuhloswe ngalo ukubeka izibhedlela zikaHulumeni eqophelweni elamukelekile lezempilo esikhathini esiningi okuyiqophelo lezibhedlela ezizimele, abantu bayaqhubeka nokubalisa ngempatho engeyinhle ezibhedlela zakuleli. Esimweni esejwayelekile izibhedlela indawo lapho wonke umuntu osuke ebuthakathaka empilweni ebuyelwa yithemba uma esefi ke kuyo ngoba usuke ezothola usizo lokwelashwa namakhambi.
Iningi labantu baseNingizimu Afrika, ikakhulukazi aboHlanga bathutheleka ezibhedlela zikaHulumeni ngezizathu ezehlukene. Phakathi kwalezi zizathu yisimo somnotho nokungabi ngaphansi kosizo lezokwelashwa.
Omunye obhekane nalesi simo sokuyofuna usizo esibhedlela sikaHulumeni kube nguMnu uMvemve Map Nxumalo waseMgababa othi isibhedlela sikaHulumeni iWentworth sayishintsha yonke impilo yakhe emuva kokuhlolwa udokotela maqede wamnika amaphilisi okungewona eminyakeni eli-12 edlule.
UNxumalo oseneminyaka yobudala engama-63 kwaphoqeleka ukuthi ashiye umsebenzi emuva kokuphenduka isixhwala ngenxa yamaphilisi athi ayemudla kancane kancane wagcina engasakwazi nokuhamba.
Uke wahamba ngesihlalo esinamasondo isikhathi eside kodwa abuye atotobe adondolozele ngenduku. Uthi noma edinga ukuhamba nokuya esibhedlela kudingeka ukuthi acele umuntu ozomshayelela ngoba akasakwazi ukuhamba yedwa ngenxa yesimo sakhe.
Uthi okubuhlungu kakhulu umbiko owenziwa omunye udokotela ayemelapha ngowezi-2012 okunguDkt uNG Gathram othi ekumhloleni kwakhe wathola ukuthi sonke lesi sikhathi ubelashelwa isifo okungeyiso.
Uma ekhuluma ngosizi asedlule kulo, nobuhlungu abuzwayo njengamanje, uNxumalo uthi ngabe ukude nempilo ukube akenzelwanga phansi udokotela wesibhedlela iWentworth. Usehambe izibhedlela eziningi zaseThekwini selokhu aqala ukuba buthakathaka empilweni kodwa esikhundleni sokuba ngcono impilo yakhe iya ngokuba yimbi. Okumkhathazayo nomndeni wakhe ukuthi bonke adlule esandleni sabo bayazihlangula manje, uyena osesele obishini. Uthi nakuba usadla anhlamvana kungumusa woMdali ngoba omunye udokotela wayesemnqumele isikhathi esithile azosiphila ngoba ebona isimo sempilo yakhe.
Elanda ngosizi lwakhe uNxumalo uthi ngowezi-2006 kwatholwa ukuthi unesifo esithile okwenza inhliziyo yakhe ingakwazi ukufutha igazi ngokwanele. Uthi waqala lapho ukudla amaphilisi enhliziyo eseneminyaka engama-40 ubudala okusho ukuthi usephile nalesi simo iminyaka engama-23.
UMkhatshwa uthi uze uqoma ukuya ezibhedlela zikaHulumeni nje kwaba iseluleko sodokotela bezibhedlela ezizimele ngoba bethi ukwelashwa kwakhe kuzoba izindleko ezinkulu ezingaqeda nemali ohlelweni lwakhe lwezokwelashwa. Uthi udokotela wokugcina ukumhlola wamenzela uhlu lwemithi wabe esenikela esibhedlela iWentworth.
“Udokotela wokuqala owangixilonga eWentworth ngesikhathi ngifi ka ngimtshela ukuthi ngithunyelwe ngabanye odokotela banginika nohlu lwemithi ababencome ukuba ngiqhubeke nayo, wathi naye kuzomele azikholise ngokuthi angixilonge kuqala. Emuva kokungixilonga wabe esenginika amanye amaphilisi, phakathi kwawo kwakukhona abizwa nge warfarin,” kuchaza uNxumalo othi usesamukelile isimo sempilo yakhe kodwa usazoqhubeka nokulwa ukuthi kwenziwe ubulungiswa.
Ubikele iBAYEDE ukuthi waqhubeka nokuthatha amaphilisi kadokotela waseWentworth, kodwa waqala izimpawu ezingajwayelekile njengokuthi ashaywe yinzululwane aphelelwe nangamandla. Uthi njalo uma kumele aye esibhedlela ayohlolwa wayefi ke alaliswe ngoba bebona ukuthi kukhona okungahambi kahle.
“Ngelinye ilanga ukuthi ngiphuza ibhodlela ngosuku, yangabe isachaza ukuthi elikabhiya engicabanga ukuthi nodokotela babe sebesebenzisa lowo mbiko,” kuchaza uNxumalo. Ukugcizelele ukuthi ukugula kwakhe akuhlangene notshwala.
Omunye umbiko wokuhlolwa kwakhe owenziwe uDkt u-A Naidoo uthi “Isiguli sidluliselwe kithina, ngaleso sikhathi besidla amaphilisi iwarfarin. Isiguli sibonakala siya ngokuba ngcono kodwa sisalisebenzisa ipayipi elisiza uma sifi kelwa umchamo kodwa kunemizamo yokuthi likhishwe. Esevala uDkt uNaidoo embikweni wakhe uncoma ukuthi uNxumalo abonwe udokotela oyiPhysiotherapy ozomsiza ukuze akwazi ukuzihambela.Ngaphambi kokukhinyabezeka uNxumalo wayesebenzela inkampani yabammeli.Unenkosikazi nezingane eziyisikhombisa.
Encwadini ayibhalela uNsumpa wesibhedlela iWentworth ngowezi-2015 uthi ubona udaba lokwelashwa kwakhe lube wubudedengu ngasohlangothini lwesibhedlela.
“Angisakwazi nokusebenza ngenxa yalesi simo, nginobunzima obukhulu bokuhamba, angisakwazi nokuzibamba uma imvelo ingithuma, sekukhona nezinto engingasakwazi ukuzenza ekhaya. Lokhu kwayiguqula kakhulu impilo yami”.
Ephendula uNsumpa uDkt uSB Kader wathi uzwelana kakhulu nesimo sempilo sikaNxumalo.
“Sengiwubhekile umbiko wokugula kwakho akukho lapho ngithola khona ukuthi kuyini okukukhalisayo. Ukuhlolwa kwakho inhliziyo okwenziwa uDkt uJJ Patel kukhomba ukuthi waba nesifo senhliziyo esikhathini esiyiminyaka eyishumi ngenxa yokuthi lokho kwakuhlangene notshwala. Bonke abasebenzi bezempilo bakwesekile ngayo yonke indlela futhi benza umsebenzi omuhle,” kuphetha umbiko kaNsumpa wesibhedlela uDkt uKader ethi uthemba ukuthi konke okubekiwe kuzomenelisa uNxumalo.
UNxumalo uvezele iBAYEDE ukuthi ufi sa noma yini engamsiza kulesi simo futhi unesifi so sokuthi udaba lwakhe lufi nyelele nakubaphathiswa bezempilo esifundazweni.
Ngesikhathi iBAYEDE ithinta obhekele izikhalo eMnyangweni Wezempilo KwaZulu-Natal uMnu uMboneni Bhekiswayo uphendule ngokuthi udaba seluludala kakhulu sekungaba inkinga ukululandela. “Ngokwejwayelekile amarekhodi agcinwa isikhathi esingangeminyaka emithathu kuya kwemihlanu,”
Uqhube wathi umuntu ongenelisekile ngendlela isibhedlela esimphathe ngayo noma enezinsolo zokungalashwa ngendlela kufanele afake isikhalo kumphathi wesikhungo sezempilo ngeHhovisi loMxhumanisi Womphakathi Nesikhungo leso okuyi Public Relations Offi cer (PRO).
“IHhovisi lethu likhuthaza ukuthi umuntu angalindi isikhathi eside engasifakanga isikhalazo. Lokhu kwenza kube lula ukusetshenzwa kodaba nabalwaziyo besekhona”.
nguNgqeshe Buthelezi Sep 20, 2018